Umncedisi kaGoogle sele eziqonda iilwimi ezimbini ngaxeshanye | I-Androidsis
Umncedisi kaGoogle uyakwazi ukuqonda iilwimi ezimbini ngaxeshanye
Umncedisi kaGoogle uye waba yinxalenye yesicwangciso sikaGoogle. Umncedisi ukhona kwizixhobo ezininzi ngakumbi nangakumbi, kwaye imisebenzi emitsha yaziswa. Kwaye kwithuba lokuqala kwe-IFA 2018, umsebenzi omtsha uchaziwe. Enkosi ngayo, sinokuqinisekisa ukuba umncedisi sele elwimi-mbini, uyakwazi ukuqonda iilwimi ezimbini ngaxeshanye.
Lo msebenzi mtsha ngu enkosi kwitekhnoloji entsha ebizwa ngokuba yiLangID ukuba inkampani sele ingenisile. Yiyo eya kwenza ukuba uMncedisi kaGoogle asiqonde ngaphandle kweengxaki xa sitshintsha iilwimi kwincoko.
Okwangoku baya kuba zizonke zintandathu iilwimi onokuthi usebenze ngazo. Iilwimi ezikhethiweyo sisiJamani, iSpanish, isiFrentshi, isiNgesi, isiTaliyane kunye nesiJapan. Nangona inkampani ngokwayo ivakalisile ukuba kulindeleke ukuba yandise eli nani kungekudala. Ngapha koko, uMncedisi kaGoogle kufuneka aqonde / athethe iilwimi ezingama-30 ngaphambi kokuphela konyaka.
I-LangID yitekhnoloji esebenzayo xa umsebenzisi eqala ukuthetha nomncedisi. Iya kuthi ibhaqe ngokuzenzekelayo ulwimi oluthethwa ngumsebenzisi. Into eza kuyenza kwimeko apho umsebenzisi atshintshe ulwimi embindini wombuzo okanye wengxoxo. Akukho sidingo sokudlula kuseto lwewizard.
Ngapha koko, ngale teknoloji, Umncedisi kaGoogle uya kuba nakho ukubona umkhwa womsebenzisi ngokweelwimi. Ke, lo msebenzi uya kwenziwa usebenze ngokulula ngakumbi, ekufuneka uququzelele ukusebenza kwawo ngokufanelekileyo kunye nokusetyenziswa kakuhle. Nangona kunokwenzeka ukuba ekuqaleni ezinye iimpazamo ziya kufunyanwa.
Abasebenzisi abanoMncedisi kaGoogle ngekhe bahlaziye izixhobo zabo ukonwabela olu phawu lutsha. Kancinci kulindeleke ukuba iilwimi ezintsha zongezwe kolu luhlu lweelwimi. Ucinga ntoni ngalo msebenzi uncedisayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Umncedisi kaGoogle uyakwazi ukuqonda iilwimi ezimbini ngaxeshanye